MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-09-16
at 9/22/2012 07:01:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် ဆက်သွယ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခံထားရသော ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် နှစ်ဦးအား စစ်ကြောရေးစခန်းတွင် အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသားအချင်းချင်း လိင်တူဆက်ဆံခိုင်းသည်ထိ ပြုလုပ်နေသောကြောင့် မိသားစုဝင်များက နိုင်ငံတော် သမတ္တ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ စာပေးပို့ခဲ့သည်။
at 9/22/2012 10:53:00 AM No comments:
BAWM YAM KAPAW AI KAW NA LAKNAK LAW LAW MATUT MU LA
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Uphkang Ginra, Uru Seng Maw, Hpakant ginra hta lai wa sai shata Wei Wei Aung Company myen asuya hpyen hpung ni shanhte hkrai bawm yam dum gap kapaw la nna si rum mat ai gaw (100) lam re hpe matut na chye lu ai. Ya ten lamu marang kaba htu nna hpungtaw hkaagre sharu dat dat rai jang myen hpyen niasinat laknak ni gaw shani shagu bai dawng pru wa wa re ai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn lamu mara kaba htu nna bai dawng pru wa ai myen hpyen nialaknak kaji kaba (50) jan lu hta la sai lam, September (21) ya shani mung (4) bai lu hta lam ai lam na chye lu ai. Lu hta la ai myen hpyen niasinat yawng hta na (10) jan sha kaja ai lam matut na chye lu ai. Lu hta la ai laknak ni hpe maram yu yang myen hpyen ni si ru mat ai gaw tsa lahta de sha re lam buga masha ni kawn tsun maram ai lam na chye lu ai.
at 9/22/2012 10:50:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Loi Jaw Bum mayan hta KIA Dap Dung (24) na myu tsaw share ninghkring ni myen hpyen ni hpe September (21) ya shana hkying (6:45pm) ten ram hta hkap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen asuyaahk-m-y (387) dap ni Ting Lung maga de lai lung wa ai kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn bawm hte hkap kapaw gasat lai wa ai re lam hpe matut na chye lu ai. Myen hpyen ni si hkala ai law ai lam hpe mung mung na chye lu ai.
at 9/22/2012 10:49:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဆဒုံးနယ်ရှိ လုထောင်ကျေးရွာရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တွင် ဗမာအစိုးရ တပ်မ (၈၈) မှ စစ်သား (၃၀) ခန့်နေရာယူ ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ဤဗမာအစိုးရစစ်သားများသည် ဘုရားကျောင်း အတွင်း အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို ပျော်ပါးနေကြကြောင်း၊ ရွာသားများ တနင်္ဂနွေ ဘုရားဝတ်ပြုရှိခိုးရန် သွားရောက်တောင်းပန်ပြောဆိုသော်လည်း ဖယ်ပေးခြင်းမရှိပဲ ဘုရားကျောင်းတွင်သာ သောက်စားမူး ယစ် ပျော်ပါးနေထိုင်နေကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပြောပြချက် အရ သိရှိရပါသည်။
at 9/21/2012 07:46:00 PM No comments:
လိုင်ဇာ - ကချင်ပြည်မှ သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် ဘာသာဗေဒပညာရှင်များအနက် နှစ်ခြင်းသိက္ခာတော်ရဆရာတော် ဦးဂျာဂွန်းသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံများ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က မြန်မာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအားဖြင့်သာ ကမ္ဘာ့အမြင်ကို ကန့်သတ်နားလည်ခဲ့ကြသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ အမှုထမ်းများကို နိုင်ငံရေးသမိုင်းသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အမြင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရန် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလျက် ရှိသည်။ ဇွန်လ၌ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် ကေအိုင်အိုနှင့် မြန်မာအစိုးရအကြား ဖြစ်ပွားနေသော လတ်တလောပဋိပက္ခ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းခြင်းတွင် ပဓါနကျသည့် အတားအဆီးများအကြောင်းကို ကချင်အမျိုးသားတစ်ဦး၏အမြင်ဖြင့် ဆွေးနွေးထားပါသည်။
at 9/21/2012 07:43:00 PM No comments:
at 9/21/2012 07:37:00 PM No comments:
at 9/21/2012 07:30:00 PM No comments:
ရိက္ခာပို့လာသော အစိုးရတပ်နှင့် KIA တိုက်ခိုက်မှုတွင် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းလိုက်ရ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား- ဗန်းမော်လမ်းရှိ အစိုးရတပ် လဂျားယန် လုံရောက် (Lung RawK) တပ်စခန်းရှိရာသို့ ရိက္ခာပို့ပြန်လာသော မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် အစိုးရတပ်ဖက်မှ နောက်ဆုတ်သွားပြီး လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရ လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
KIA တပ်မဟာ (၅) အောက် တပ်ရင်း (၂၃) တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရတပ် ခလရ (၁၄၂)သို့ ရိက္ခာပို့လာသော တပ်ဖွဲ့နှင့် ရှဒန်ပါ (Shadan Pa) တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ညနေ့မှ သန်းခေါင်ချိန်ထိ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များနှင့် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် အစိုးရတပ်များ၏ ဗဇူကာ အမြောက်ဆံ ၁ ခု၊ လက်နက်သေး ကျည်ဆံ ၁၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပြောသည်။
“ညသန်းခေါင်မှာ ကျနော်တို့ သွားလိုက်တာ ရှေ့အဖွဲ့ကဝင်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးအဖွဲ့ကိုမှ ပစ်တာ အဲချိန်မှာအားလုံး ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။”
ထို မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် KIA တပ်ရင်း (၂၃)တပ်ဖွဲ့တို့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်မှ အများဆုံးသေဆုံးကြောင်း ရှေ့တန်းမှပြောဆိုသော်လည်း နှစ်ဖက်လုံး အသေအပျောက်ကိုမူ တိကျစွာ မသိရှိရသေးပေ။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ယနေ့ည ထိဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ ရိက္ခာလာပို့သည့် မြန်မာအစိုးရတပ်များနှင့် KIA သည် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စ၍ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့အထိ နေ့၊ ည မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါနယ်မြေတွင်း အနည်းဆုံး ၃ နေရာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး ယခုချိန် နားလုံ၊ ခယာ၊ ရှဒန်ပါ တပ်မဟာ(၅) နယ်မြေတွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်နေကြောင်း KIA ပြောသည်။
ဆက်လက်၍လည်း ယခုချိန် မြန်မာအစိုးရတပ်များသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီးတွင် စစ်အင်အားများ ဖြည့်တင်းတိုးချနေကြောင်း KIA အရာရှိများဆိုသည်။
at 9/21/2012 01:54:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရ တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းတစ်ခုကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA မှ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီချိန်တွင် မိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အစိုးရတပ်မှ ၈ ဦးသေဆုံးကြောင်း ရှေ့တန်းမှ အရာရှိတဦး ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံတပ်ရင်း (၁၅) မှ မြန်မာအစိုးရတပ် တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်တွင် လုံခြုံရေးယူထားသော တပ်မ (၉၉) တပ်ပေါင်းစုတပ်ကို အနီး ရာဘာခြံတွင် မှိုင်းဖောက်ခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် သေဆုံးမှုဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်က တစ်လုံးဘဲ ဖေါက်ကွဲလိုက်တာ တခါထဲ ၈ ယောက်လဲသွားတယ်။ ကျန်တဲ့သူနဲ့လည်း အနည်းငယ်ပစ်ခတ်ကြပြီး လက်နက်ကြီးနဲ့လည်း ၁ ခေါက် ၂ ခေါက် ပစ်ပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်သွားတယ်” ဟု ရှေ့တန်းမှဆိုသည်။
ထိုမြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့အား တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်အနီးတွင် ကင်းလှည့်နေစဉ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ မှိုင်းဖြင့်ပစ်၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တာပိန်မြစ်ရေအားလျှစ်စစ်အနီးဝန်းကျင်တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် နေရာကွက်ကြား ၅ နေရာခန့်တွင် အင်အား၂၀ ကျော်ဖြင့် တပ်ချထားကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်လုံခြုံရေးနှင့် တပ်ချထားသည့် နေရာများသည် ဇိန်းခုန်းလမ်း (Zinghkung lam)၊ တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်ရုံး၊ ဆန်ဂန်ရွာ (Sang Gang)နှင့် ဗန်းမော်သွားလမ်းများတွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းနယ်မြေတွင်ရှိနေသော အစိုးရစစ်အင်အားများနှင့် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ညတွင် ဗန်းမော်ဘက်မှ စစ်ကား ၄ စီး နှင့် အင်အား ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် ထပ်မံရောက်ရှိလာသည့် တပ်သားများသည် ယနေ့ ဒေါ့ဖုန်းယန်ရွာအတွင်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တိုက်ပွဲများသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ချထားသောနေရာတ၀ိုက် နှစ်ဖက် အသင့်အနေထားဖြင့် တင်းမာမှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများရှိနေချိန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေကြောင်း KIA ဗဟိုအရာရှိများပြောသည်။
at 9/21/2012 01:53:00 PM No comments:
at 9/20/2012 06:01:00 PM No comments:
at 9/20/2012 05:54:00 PM No comments:
2012 ning September 19 ya shani hkying 10:00 am aten, KIA masat3Dap Ba, Dap Dung 15 ginra, Bum Sawn kaw nna Sang Gang maga lai yu wa ai Myen Hpyen Dap Hk.l.y 121 na hpyen ngun marai 8 hpe, KIA masat 15 Dap Dung na hpyen hpung ni, Rubber sun kaw, bawm majan hte hkap gasat ai hta Myen Hpyen Dap maga na yawng hkrat sum mat ai lam chye lu ai.
at 9/20/2012 03:16:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကြီးနား - တနိုင်းမြို့သွား ကားလမ်းပေါ်က တံတား ၁ စင်း မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
နမ္မတီးမြို့နယ်ခွဲ ကံလှကျေးရွာအနီးက ရေအေးချောင်းတံတားဟာ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ကျော်မှာ ဖောက်ခွဲဖျက်စီးခံရတာပါ။
၄၇ ပေရှည်တဲ့ ရေအေးချောင်းတံတားဟာ သံဘောင်တံတား ဖြစ်ပြီး ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့အတွက် တံတား သံဘောင်တွေ ပျက်စီးသွားတယ်လို့ နမ္မတီးဒေသခံက ပြောပါတယ်။
''သူက သံဘောင်တံတားဖြစ်တဲ့အတွက် သံဘောင်တစ်ချောင်း ပြတ်သွားတယ်။ နှစ်ခုတွဲမှာ နောက်တချောင်းက လည်း ပါးပါးလေးပဲ ကျန်တော့ ကားကြီးတွေ၊ ကားငယ်တွေ ဖြတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။''
တံတားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နယ်မြေခံတပ်ဖွဲ့တွေက လူတဦးကို ဖမ်းဆီးထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေအေးချောင်းတံတားဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့ တနိုင်းမြို့သွား ကားလမ်းပေါ်က ဖြစ်ပါတယ်။
ရေအေးချောင်းတံတား ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ပြတ်တောက်သွားပြီး တနိုင်းမြို့မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတယ်လို့ ဒေသခံက ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးဒေသမှာ အမှတ် (၃) စစ်ဆင်ရေးကွက်ကဲမှု ဌာနချုပ်နဲ့ တပ်ရင်း (၁၀) ရင်းရှိပြီး ဖောက်ခွဲခံရတဲ့ ရေအေးချောင်းတံတားနဲ့ စကခ (၃) ဌာနချုပ်နဲ့ဟာ ၁ မိုင်ပဲ ဝေးကွာတာပါ။
ဒီဖောက်ခွဲမှုဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါ။
at 9/20/2012 10:32:00 AM No comments:
အဆိုပါဆန္ဒပြုပွဲအတွက် နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က စာတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့် လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ထုတ်ထားသော ခွင့်ပြုမိန့်အပြင် မြို့နယ်၏ လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်သော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ငြိစွန်းနေ၍ဟု ဆိုကာ ထိုရဲစခန်းမှပင် ၁၆ ရက်နေ့က ငြင်းပယ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
at 9/20/2012 10:31:00 AM No comments:
at 9/20/2012 10:16:00 AM No comments:
သူက မြန်မာ့တပ်မတော်တိုင်းမှူးတယောက်ကို လုပ်ကြံမှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ၂၇ နှစ် နေခဲ့ရသူပါ။
၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ သူနဲ့ တခြားKIA စစ်သား ၃ ယောက်က တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အယ်လ်ခွန်ဖန်ကို မြစ်ကြီးနားဂေါက်ကွင်းနားမှာ စောင့်ပြီး လုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့တွေ ဈေးသည်ယောင်ဆောင်ပြီး စောင့်တယ်၊ ခြင်းတောင်းထဲ AK-47 သေနတ်ဖွက်ထားတယ်၊ တိုင်းမှူးကားလာတော့ လဖိုင်ဇော်ဆိုင်းက ကားဘီးကိုပစ်၊ ပြီးတော့ တိုင်းမှူးနဲ့ဒရိုင်ဘာကို ပစ်တယ်၊ လဖိုင်ဇော်ဆိုင်းရဲ့လက်ထောက်တွေက တိုင်းမှူးရဲ့လုံခြုံရေးစစ်သားတွေကို ပစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆုံရပ်မှာ လူပြန်စုတော့ သူ့လက်ထောက်တယောက် ရောက်မလာတာနဲ့ လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ရှာရာမှာ အဖမ်းခံရ ထောင်ကျပါတယ် တဲ့။
at 9/20/2012 10:14:00 AM 15 comments:
“ဒေါ်စု ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်၊ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာမှ နှုတ်ပိတ်တယ်လို့ မရှိဘူး။ ဒေါ်စု ပြောနေတဲ့ အကြောင်းက ပထမဆုံး အပစ်အခတ်တွေ ရပ်စဲဖုိ့လိုတယ်၊ ပစ်နေခတ်နေကြရင် ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ နောက်တချက်က တိုင်းရင်းသား အရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေး၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့အချက် ၂ ချက်ကို ကြည့်ပြီး စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီ ပြည် ထောင်စု ဆိုတာဖြစ်ဖို့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြပါဆိုတာ ပြောနေတာ” ဟု သူက ဆိုသည်။
at 9/20/2012 10:09:00 AM No comments:
ဖားကန့်စစ်ဗျူဟာမှူးနှင့် KIA တပ်ရင်းမှူးတို့ကို ၈၈ မျိုးဆက်တွေ့ဆုံ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်း ဒေသကို ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဒီလ ၁၆ ရက်နေ့က ၁၈ ရက်နေ့အထိ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဖားကန့်ဒေသ စစ်ဗျူဟာမှူးနဲ့ KIA တပ်ရင်းမှူးတို့ကို သီးခြားစီ နှုတ်ဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖားကန့်ဒေသ အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို အချင်းချင်းကြားထဲမှာ မတိုက်ချင်ဘဲ တိုက်နေရတဲ့ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်စဲနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလားအလာကောင်းတွေ ရှိတယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဋ္ဌေးကြွယ်က ဖားကန့်ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန် မိုးကောင်းမြို့ ရွာသစ်ရပ်ကွက်ရှိ ဒေသခံတစ်ဦး နေအိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့ မီဒီယာနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
at 9/20/2012 09:45:00 AM No comments:
Wunpawng mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba5up hkang ginra rai nag ai Na Lung mare kaw dai hpawt manap hkying 2:00 am ram kawn KIA Ginjaw Shimlam Hpung ni hte myen Asuyaahypen Hpung n gun 300 ram laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Majan gaw ya ten du hkra matut manoi naw rai nga ai lam hte lahkawng maga na laknak gaba ni hte gap gasat nga ai re lam shiga na chye lu ai. KIA myutsaw share ninghkring ni kawn shat shadu sha, hkring sa la na aten pi nlu laja lana gasat taw nga ai re lam na chye lu ai. Buga shara shagu du nga ai Wunpawng Myusha ni ja jaakyu hpyi garum ya na lam mung saw lajin wa ai.
at 9/19/2012 08:42:00 PM No comments:
တရုတ်နယ်စပ် လွယ်ဂျယ်နှင့် မိုင်ဂျာယန် ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမပေါ်တွင် ၎င်းရုံးကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတို့မှ မည်သူမဆို လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
at 9/19/2012 09:37:00 AM No comments:
ကချင်တိုက်ပွဲတွင်း ပစ်ရှင်းစနစ်ဖြင့် လက်နက် ကြီးများ ပိုအသုံးပြုလာ
ကချင်ဒေသို့ ထိုးစစ် ဆင်နေသော အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များမှ ပစ်ရှင်း စနစ်ဖြင့် လက်နက်ကြီး များကို ပိုမို အသုံးပြု လာကာ ၁၀၅ မမ အမြောက်ကြီး များကို အသုံးပြု ပစ်ခတ်လျှက် ခဲ့ကြောင်းနှင့် တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIA ပြောခွင့်ရ ဦးလနန်းက ပြောပါသည်။
“မနေ့က ကျနော်တို့ လိုင်ဇာ ဗဟိုဌာနချုပ်နဲ့ ၁၀ မိုင်ကျော် အကွာမှာ ရှိတဲ့ ဒေ့ါဖုန်းယန် ရွာဘက်မှာ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့နဲ့ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲငယ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မနက် (၅း၃၀) နာရီ အချိန် ကနေ နေ့လည် အထိ အစိုးရ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ကနေ ၁၀၅ မမ နဲ့ အကြိမ် (၂၀) ပစ်ခတ်သွားတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ဒေ့ါဖုန်းယန်မှ (၃) မိုင်အကွာရှိ ဒိန်ဂါယန် (Dingga Yang) တွင် တပ်ချ ထားသော မြန်မာ အစိုးရ၏ ခလရ (၁၄၂) နှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်ဖွဲ့ KIA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၂၄) ကြား ယမာန်နေ့ နနံက် (၅း၃၀) နာရီချိန်တွင် တိုက်ပွဲငယ် ဖြစ်ပွား ခဲ့ရာက အစိုးရ တပ်ဘက်မှ ယခု ကဲ့သို့ ၁၀၅ မမ လက်နက် ကြီးဖြင့် အကြိမ် (၂၀) ခန့် အသုံးပြု ပစ်ခတ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
at 9/19/2012 09:35:00 AM No comments:
ဗမာစစ်တပ်မှ တနိုင်းသို့ စက်ဆီနှင့် ဆန်တင်ပို့ခွင့် ပိတ်ပင်
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းဒေသသို့ ဗမာအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း မပခ မှ စက်ဆီနှင့် ဆန် တင်ပို့မှုများကို စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဗမာအစိုးရ၏ ပိတ်ပင်မှုကြောင့် တနိုင်းသေဒရှိပြည်သူများ စက်သုံးဆီနှင့် ဆန် ဈေးမြင့်လာသောကြာင့် ဒုက္ခရောက်နေကြကြောင်း၊ ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ်ငွေ (၅၀၀၀၀) ဖြင့်ဝယ်စားနေရကြောင်း သတင်းရ ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ဘက်တိုင်း တပ်မဟာ (၂) ဌာနချုပ်ဖြစ်သော အောင်လောဒ့် နှင့် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၄) ဒေသဖြစ်သော နမ့်ဗျူ ဘက်သို့ ရိက္ခာဖြတ်တောက်ချင်၍ ယခုကဲ့သို့ စက်ဆီနှင့် ဆန် တင်ပို့မှုကို လုံးဝပိတ်ပင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 9/19/2012 09:31:00 AM No comments:
LAJA YANG DE MYEN HPYEN NI LAKNAK KABA SHANI TING GAP
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) Ginra rai nga ai Myitkyina Manmaw lam Laja Yang mare de Daw Hpum Yang daju ai myen asuya hpyen dap ni gaw Hang Kai Bum kawn (105mm) laknak kaba ni hte shani ting gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen hpung ni kawn dai na maga hkying (4:00pm) ram du hkra laknak kaba ni hte gap sharu bun nga ai re lam hpe mung na chye lu ai. Myen hpen nialaknak kaba ai majaw hkra machyi ai lam n nga ai rai tim laknak kaba ngoi kapaw ai n sen ni hpe Laiza mare kawnadan sha na lu ai majaw buga masha ni kawn myit tsang ai lam ni gaw nga lai wa sai lam shiga na chye lu ai.
at 9/19/2012 09:29:00 AM No comments:
at 9/19/2012 09:28:00 AM 1 comment:
at 9/19/2012 09:26:00 AM No comments:
at 9/18/2012 03:02:00 PM No comments:
လက်ရှိအနေအထားအရ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း မငြိမ်မသက်စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်ခဲများနှင့် ဆုံးရှုံးနေသောတိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးများအတွက် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးပါရန်သာ မေတ္တာရပ်ခံသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်စွဲဖြင့် ကချင်မဟာမိတ် (Kachin Alliance) မှ ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
ချီးမြှင့်သောဆုတံဆိပ်အားလက်ခံရယူရန်ရောက်ရှိလာခြင်းကို ဂုဏ်ယူမိသော်လည်း ထိုဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူဖွယ်အခမ်းအနားတွင် ကချင်တိုင်းရင်းသားအနေဖြင့်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ကချင်မဟာမိတ် (Kachin Alliance) K.A. တာဝန်ခံ အင်ဆန်ဂွမ်ဆန် (Nsang Gum San) ပြောသည်။
“လွှတ်တော်ကနေဖိတ်ခေါ်တဲ့စာ ကျနော်တို့ဆီရောက်လာတယ်။ ဂုဏ်ပြုပွဲတက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာနဲ့ ညစာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာ လက်ခံရရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ဒီလိုပျော်ပွဲမှာ မပါဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွန်ခဲတဲ့ ချိန် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန် မြန်မာအစိုးရပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီပါတီကလည်း အစိုးရထဲပါတဲ့ပါတီဖြစ်တယ် လွှတ်တော်ကလည်း စစ်အစိုးရကိုထောက်ခံနေတာလေ”
လက်ရှိကာလ ကချင်ပြည်နယ်တွင် နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်မက်ဘေးဒဏ်ကြောင့် မိမိတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ လျစ်လျူရှုခံနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် ၀မ်းနည်းပူဆွေးသောကများဖိစီးမှုဖြင့် ကြေကွဲလျက်ရှိနေချိန်၊ ကချင်လူမျိုးများသောင်းနှင့်ချီ၍ နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေရသည့်ကာလ စသည့်အခြေအနေများတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ရန်မှာ မည်သို့မျှဆီလျော် အပ်စပ်ခြင်းမရှိကြောင်း ရေးသားပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် အချက် (၅) ချက်ဖြစ်သော ‘စစ်မှန်ပီပြင်သောငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် နှင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကို ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် လိုအပ်သောပြည်တွင်းပြည်ပ အထောက်အပံ့များလွှပ်လပ်စွာပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အင်အားကိုရယူကာ ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွက် အသုံးပြုနေသောစစ်အသုံးစရိတ်များကို တားဆီးပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ဆက်လက်၍ ‘လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(သို့မဟုတ်) စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသောဒေသများနှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အချိန်မရွေးသွားရောက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် မြစ်ဆုံဆည်နှင့်အတူ ချီဖွေဆည်ကဲ့သို့သော ဧရာဝတီမြစ်ဖျားတွင်တည်ဆောက်ရန်ရှိသော အခြားဆည်(၆)ခုအားယာယီရပ်ဆိုင်းရုံသာမကပဲ လုံးဝဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုတော့ရန်စသည့်အချက်များဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကွန်လွန်သွားသဖြင့် တိုင်းရင်းသားများအတွက်ပေးအပ်ထားသောကတိစကားကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် သမီးပီသစွာတိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားပါရန် မေရိကန်ပြည်ထောင်စု Kachin Alliance အဖွဲ့မှ အလေးအနက်မေတ္တာရပ်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
KIA နှင့် ဒိန်ဂါယန်တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် ၃ ဦးကျ ၆ ဦးဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မှ ၃ မိုင်အကွာရှိ ဒိန်ဂါယန် (Dingga Yang) တွင်တပ်ချထားသော မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ကြားတိုက်ပွဲအနည်းငယ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရတပ်မှ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း ရှေ့တန်းမှ အရာရှိများမှသိရသည်။
ဒိန်ဂါယန်တွင် တပ်စွဲထားသော အစိုးရတပ်အင်အား ၂၀ ကျော်ရှိ ခလရ (၁၄၂) တပ်ကို KIA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၂၄) မှ မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် ကျဆုံးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုချိန် ထိုအစိုးရတပ်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောသူများကို ဒေါ့ဖုန်းယန်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်း မျက်မြင်များ ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ကြား ပဋိပက္ခများသည် ဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ဖက်သို့ တပ်အင်အားများတိုးချဲ့ကာ ထိုးစစ်ဆင်မှုများ မရပ်မနားရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ညတွင်လည်း ဗန်းမော်ဘက်မှ မြန်မာအစိုးရတပ်သည် စစ်ကား ၄ စီး အင်အား ၈၀ ကျော်ဖြင့် နွမ်လန် (Num Lang) ရွာတွင် တပ်စွဲထားသည့် ခမရ (၄၃၈) သို့ စစ်အင်အားများထပ်မံဖြည့်နေကြောင်း KIOအရာရှိများပြောသည်။
at 9/18/2012 03:01:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် လဂျားယန်တိုက်ပွဲတွင် ကျောင်းသားတပ်မတော် ၁ ဦးကျ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်လမ်းရှိ လဂျားယန်တွင်တပ်ချထားသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ မြန်မာပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) များနှင့် မြန်မာအစိုးရတပ် ခလရ (၁၄၂) တပ်များသည် ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီမှ အမြောက် လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော်မှ ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ ကြောင်းသိ ရသည်။
ထိုမြန်မာအစိုးရတပ်သည် တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေ ဒေါ့ဖုန်းယန်မှ လက်နက်ကြီး မော်တာ(၈၁ မမ)နှင့် (၁၀၅ မမ) အမြောက်ဖြင့် KIA ကိုပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင်ပစ်ခတ်ခဲ့သော အမြောက်ကျည်ဆံ ကျရောက်ပေါက်ကွဲချိန် ကျောင်းသားတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့တွင် ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှေ့တန်းမှပြောသည်။
“ကျနော်တို့ရှိတဲ့ဘက်ကို အမြောက်မော်တာ ၂ လုံးလာကျတယ် ၁လုံးက မီးဖိုချောင်နားလာကျတယ် ၁ လုံးက ကျင်းမှာရှိနေတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်သား ၁ ဦးကိုလာထိသွားတယ်” ဟုရှေ့တန်းမှတာဝန်ရှိသူက ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်မှလည်း သေဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုများရှိနိုင်သော်လည်း စာရင်းအတိကျမသိရှိကြောင်း ပြောသည်။
ထိုသို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုသည် နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ခဏသာနားပြီး ယနေ့ညနေထိ ဆက်လက်၍ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ရှေးတန်မှဆိုသည်။
at 9/18/2012 03:00:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၈၈ နှင့် ဖားကန့်ပြည်သူများ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆို
(မဇ္စျိမ) ။ ။ တတိုင်းပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အပါအဝင် ဖားကန့်မြို့မှ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်း ပေါင်းစုံမှ ဘုန်းတော်ကြီး၊ သင်းအုပ်ဆရာများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးများက ဖားကန့် မြို့မ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စုပေါင်း၍ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တောင်းဆို လိုက်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်က ပြောသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် တနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဖားကန့်မြို့ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ ယခုကဲ့သို့ စုပေါင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဖားကန့်ဒေသမှာ လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ နှစ်ဖက် တပ်ကြားမှာ ကြောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြတယ်။ စစ်ပွဲနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကို ဖြေရှင်းကြဖို့ ပြည်သူတွေကနေ လိုလားတောင်းဆိုနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကချင်တခုလုံး ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ ဖားကန့်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ ပြည်ထောင်စုကြီး တခုလုံး ငြိမ်းချမ်းဖို့ အတွက်ကို အားလုံးက ဆန္ဒပြုကြတယ်” ဟု ကိုဌေးကြွယ် က ပြောသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပြုလွှာကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးထံသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖားကန့်မြို့ပေါ် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း ၄၁ နေရာရှိပြီး ဒုက္ခသည်လူပေါင်း ၈,၇ဝဝ ကျော်ရှိရာ ၎င်းတို့အား အားပေး နှစ့်သိမ့်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီး နေရာထိုင်ခင်းနှင့် အစားအသောက်များအတွက် အကူအညီများ လိုအပ်နေသည် ဟု ကိုဌေးကြွယ်က ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ အမြန်ဆုံး ပြန်ဖွင့်ဖို့လိုကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားသဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်လာပါက အစားအသောက်များ အကြပ်အတည်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ အစိုးရက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းစေလိုက်သဖြင့် ကျောက်ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင် များ အားလုံး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ပြတ်တောက်မှုမှာ ယခုဆိုလျှင် သုံးလကျော် ကြာမြင့်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
၈၈ ကျောင်းသားများက မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် ကျပ် ၁၇၅ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ပူတာအိုမြို့နယ် တွင် ဆန် ပြတ်လတ်မှုများ ရှိနေသဖြင့် ကျပ် ၂၅ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ကာ ဖားကန့်မြို့ပေါ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက်မူ ကျပ် သိန်း ၅ဝ ကျော် လှူဒါန်းခဲ့သော်လည်း လိုအပ်ချက် အများအပြား ရှိနေသေးကြောင်း ကိုဌေးကြွယ်က ပြောသည်။
“လိုအပ်ချက်နဲ့ ကျနော်တို့ လှူဒါန်းငွေက အရမ်းကို ကွာဟလွန်းပါတယ်။ လိုအပ်ချက်က အများကြီး ရှိနေတယ်။ နေရာ ထိုင်ခင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုရင် ဆွမ်းစားဆောင်တွေကစ မကျန်တော့ဘူး။ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဆိုရင်လည်း ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့ ခန်းမတွေကစ မကျန်တော့ဘူး။ အားလုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်နေရတဲ့ သဘော ရှိတာပေါ့။ ရေလျှံနေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များသည် ဖားကန့်မြို့ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဘုရားကျောင်း၊ အေးမြသာယာ ရပ်ကွက် မှ ရဝမ်ကုန်း ဧဝံဂေလိ ဘုရားကျောင်း၊ မှော်မုန် ကျေးရွာမှ နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းနှင့် ဇေယျဝတီ ကျောင်းတိုက်နှင့် သန်းကြွယ် မစိုးရိမ် ကျောင်းများ အပါအဝင် ငါးနေရာမှ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား တနင်္လာနေ့တွင် သွားရောက်
တွေ့ဆုံ၍ အားပေး စကားပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်း ဖားကန့်လှောန်ခန်၊ မှော်စီဆာ၊ နမ်းမဖြစ်ရပ်ကွက်ရှိ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းနှင့် ငှက်ပျော်တော ရပ်ကွက်ရှိ စိတ်ပတ်ထရစ် ဘုရားကျောင်းများရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ကက်သလစ် အသင်းတော်မှ ဆရာနော်ဂျာက ပြောသည်။
“စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေကို အားမငယ်ဖို့ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ရယ်။ နောက်ပြီး ကျောင်းသူတယောက် ပစ်သတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် ဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ အကြောက်တရား ကင်းဖို့ကို ဟောပြောပါတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က အစိုးရတပ်ဘက်မှ ပစ်ခတ်ခံရ၍ သေဆုံးသွားသူ ဆွတ်ငိုင်ယန် ကျေးရွာမှ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် နဝမတန်း ကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိန် ၏ မိဘနှစ်ပါးနှင့်လည်း တွေ့ဆုံ၍ အားပေးစကား ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး သွားလာခဲ့ရာ ခရီးစဉ်တခုလုံးထဲတွင် ဖားကန့်လမ်းသည် အခြေအနေ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ ကျောင်းသားများက မှတ်ချက်ပြုကြသည်။
ဖားကန့်မြို့ပေါ်တွင် လူမျိုးချင်း သွေးခွဲနေမှုများအား လက်မခံကြောင်း ၈၈ တို့က ဟောပြောခဲ့သည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ဦးဒရှီလဆိုင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ လူမျိုးအချင်းချင်းကို သွေးကွဲတာတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကို လက်မခံဘူး။ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်ကြဖို့ပြောတယ်။ နောက် ကိုယ့်စီးပွားရေး လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဖာသာကို စီးပွားရေးလုပ်ပါ။ ဒီမှာရှိတဲ့ တရုတ်တွေက ကျနော်တို့ ကချင်နဲ့ ဗမာတွေကို သွေးခွဲအောင် လုပ်ဆောင်နေတာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိထားတယ်လို့ ထင်တာပဲ” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
လက်ရှိ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ KIO တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု မရှိဘဲ နှစ်ဘက် သတိဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
at 9/18/2012 02:56:00 PM No comments: